Lalao Karatra fanao mafana tsara indrindra ho an'ny mpanamboatra sy orinasa manokana |Hicreate
Lalao Hot Custom Card ho an'ny famolavolana manokana
Tsy maintsy ho zavatra mahafaly ny mamolavola ireo mpilalao lalao tianao indrindra amin'ny karatra lalao tianao indrindra, koa andao hataontsika izany.
Ny lalao karatra dia azo zaraina ho sokajy 8.Anisan'izany ny lalao abstract, kilalao an-dakilasy, kilalao ho an'ny ankizy, lalaon'ny fianakaviana, lalao fety, lalao paikady, lalao lohahevitra ary lalao ady.
Rehefa irery ao an-trano ianao dia afaka milalao lalao solaire noforonin'ny orinasanay.
Raha ampiasaina amin'ny fampisehoana majika izy io, dia manoro hevitra izahaylalao karatra.
1. Kilasy abstract:
Miaraka amin'ny fitsipika tsotra sy ny mekanika lalao, ny fampahalalana momba ny lalao dia aseho amin'ny fomba hita maso, ary ny fepetra mandresy dia matetika ny mpilalao iray mamely ny iray hafa.
2. Sokajy namboarina:
Ny toetra dia tena avo, ny ankamaroan'ny karatra dia namboarina karazana.Tena hizaha toetra ny fisainan'ny mpilalao sy ny mpilalao mila manomana ny lalao Accessories.
3. Lalao karatra ho an'ny ankizy
Raha milalao ho an'ny zazakely ao an-trano, dia manoro hevitra ny lalao piozila.
Puzzles tsotra, amin'ny ankapobeny tsy misy fitsipika, props dia somary mafy sy mateza.
4. Lalao karatra fianakaviana
Rehefa mivory ny fianakaviana dia mety te hilalao echec ianaolalao karatrahampiroborobo ny fihetseham-po.
Tsy dia mafy loatra ny fifanintsanana, indrindra momba ny fiaraha-miasa mahomby, ny tanjona dia ny hamboly fihetseham-po indrindra.
5. Lalao Karatra Antoko
Mifantoha amin'ny serasera Fiaraha-miasan'ny mpilalao lalao latabatra miaraka amin'ny isan'ny mpandray anjara amin'ny ekipa.
6. Lalao paikady
Misy fomba paikady lalindalina kokoa miaraka amin'ny fitsipika efa novolavolaina tsara sy lalao latabatra manohitra kokoa.
7. Lalao karatra ady
Ny lalao karatra dia nivoatra tamin'ny alàlan'ny sainam-miaramila misy famaritana fitsipika sarotra sy tokonana avo.
8. Lalao karatra misy lohahevitra
Misy tantara miavaka sy lohahevitry ny lalao.Ny ankamaroany dia mitaky ny mpilalao hifanerasera sy hanana lahatsoratra bebe kokoa hovakiana.
Ny endriky ny lalao board dia mahaliana ary azo amboarina bebe kokoa.
【Endriky ny lalao】
Ady henjana, famolavolana fahaiza-manao, mandà tsy ho tonga lafatra.Ny lalao dia manana fiantraikany tsara amin'ny ady sy ny habaka fiasana, eo amin'ny dingan'ny ady amin'ny mpilalao, ny fahatapahan-jiro raha atambatra amin'ny paikady sy fomba sasany dia ho avo roa heny.
Ny sasany amin'ny lalao dia notsorina, minus ny asa mandreraka, manome fotoana bebe kokoa ho an'ny mpilalao mba hiaina ny lalao sy ny toerana bebe kokoa hankafizana ny fiainana.
Eo am-pankafizanao ny fahafinaretana amin'ny firotsahana an'izao tontolo izao, dia afaka mahita tantara, fizarana ary tantaram-piainan'ny maherifo nitranga tao amin'ny tontolon'ny Cyber ​​ianao amin'ny alalan'ny fijerena tetika, ary hiaina ireo zava-mitranga lehibe eran'izao tontolo izao miaraka amin'ireo olo-mahery ao amin'ny tantara.
Milina manapaka taratasy
Manapaka taratasy ho an'ny lalao board sy lalao karatra.
Heidenhain 1020 loko efatra nafarana avy any Alemaina
Haingam-panontana haingana, 10.000 eo ho eo isan'ora.
Ny milina embossing sakan'ny varavarana lehibe vaovao nampidirina tamin'ny taona 2020, ny orinasa ankapobeny dia 470, ny orinasanay dia 1020.
850 milina fametahana
Masinina manodidina ny lafiny efatra
Boaty fametahana tanana
Mpiasa mahay 30, baoritra miendrika tsy ara-dalàna amin'ny tanana.
Masinina mitsingevana mandeha ho azy
Ny tena velarantany dia 5.000 metatra toradroa, izay afaka mandray entana marobe mivangongo.
teo aloha: Orinasa mpanamboatra kilalao lalao karatra manokana
Manaraka: Karatra Poker Classic ho an'ny lalao karatra filokana
Custom amidy mafana milalao lalao karatra Manufacturin...
Karatra tarot mahazatra ho an'ny lalao board malaza
Karatra Poker Classic ho an'ny lalao karatra filokana
Black New Design Wholesale Playing Card Poker F...